भानुभक्तलाई किन सम्झिने ?  OnlineKhabar
मंगलबार, ३ असोज, २०७४
भानुभक्तलाई किन सम्झिने ?
भानुभक्तको योगदान पृथ्वीनारायण शाहको भन्दा ठूलो छ
साहित्य दुई किसिमले लेखिन्छ । एउटा युटोपिया हेराइ अर्थात् भोलिको कल्पना गरेर, अर्को हिजोको सम्झना गरेर । साहित्यमा कल्पनाशीलता हुन्छ । तर, मैले कविता लेख्दा स्वैरकल्पनामा पुगे पनि त्यसको आधार यथार्थ नै हुन्छ ।
भानुभक्त आजका दिनमा भए कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर मैले कहिल्यै कल्पना गरिनँ । दृष्टिदोष भयो । भानु थिए भने के गर्थे, के सोच्थे, के लेख्थे होलान् भन्ने कुरा बडा रोचक हो । त्यसमा म पछि रमाइलो चर्चार् गर्नेछु । पहिले राजनीतिक परिवर्तनपछि भानुभक्तप्रति देखिएको असन्तुष्टि र आक्रोशको कुरा गरौं ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास आजको दिनसम्म आउँदा धेरै उतारचढाव भइसक्यो । यस क्रममा ०४६ साल र अझ भन्दा ०६२/६३ पछि हाम्रो सोचाइ र दर्शनमै ठूलो परिवर्तन आयो । पहिले पञ्चायतले निर्माण गरेको एक भाषा, एक जाति, एउटा संस्कृति भयो भने मात्र नेपाल बलियो हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट ३० वर्ष शासन चल्यो ।
परिवर्तनपछिको समयमा अहिले डिस्कोर्स बदलियो । त्यो के हो भने, विविधतामा एकता खोज ।
नेपाल भन्ने देशको शक्ति भन्नु नै विविधता हो । विविध संस्कृति हुनु, विविध जाति हुनु, विविध भूगोल हुनु नेपालीहरुको सम्पत्ति र संसारमै विरलै पाइने सौन्दर्य हो भनिन्छ ।
अहिले मूल रुपमा हामीकहाँ दुई वटा डिस्कोर्स देखिन्छ । एकातिर, देश भत्किन आँट्यो, टुक्रिएर जान आँट्यो भनेर क्वाँक्वा रुनेहरु छन् । मधेसीको माग सुनेर संविधान संशोधन गर्‍यो भने यिनीहरुले अलग देश बनाउँछन् भन्ने उनीहरुको चिन्ता छ ।
अर्कातिर, तिमी जति अधिकार दिँदै जान्छौं, त्यति नेपाल बलियो र समृद्ध हुन्छ, नेपालको राष्ट्रियता त्यहीँनेर सार्थक हुन्छ भन्ने चिन्तन पनि छ ।
०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि राजतन्त्र फालिनासाथ जसरी पृथ्वीनारायण शाह ठूलो विमर्श र आलोचनामा तानिए, त्यसैगरी भानुभक्त पनि तारो बने । राजनीतिक रुपमा पृथ्वीनारायण विवादको पात्र बने, सांस्कृतिक रुपमा भानुभक्त आए । कति ठाउँमा राजा-महाराजाको सालिकसँगै भानुको सालिक पनि फालियो ।
इतिहासदेखिको दमित र उत्पीडित भएका जाति, सामुदायहरुको आवेगको प्रष्फुटन थियो त्यो । असन्तुष्ट समुदायले आदिकविलाई निश्चित जाति र समुदायको कवि भनेर मात्र प्रहार गरेनन्, त्यसको अन्तर्यमा हिजोको व्यवस्थाले एक भाषा, एक जाति भन्ने जुन अभियान चलायो, त्यसको सिकार हामी भयौं, हाम्रो भाषा र संस्कृति नासियो, हाम्रो जातिमाथि अन्याय भयो भनेर उनीहरुको आक्रोश पोखियो । दबाउने, मौलिक भाषा-संस्कृतिको विनाश गर्ने, उपेक्षा गर्ने इतिहासदेखिको सिलसिला अहिलेसम्म जारी छ भनेर प्रतीकात्मक रुपमा प्रतिकार गरियो ।
भानुभक्तलाई समाजले जुन शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्दै गयो, जसरी सालिकमाथि प्रहार गर्‍यो, मेरो ठम्याइ चाहिँ त्यो ठीक होइन भन्ने हो । नेपाली भाषा-साहित्यमा भानुभक्तको योगदान म असाध्यै उँचो देख्छु । नेपाली भाषा आजको स्थितिमा विकास हुनुमा उनको साह्रै ठूलो योगदान छ ।
उनले लेखेको रामायण जनमनमा भिजेको छ । मेरी आमा र हजुरआमा रैनी हुन्, दुवै जना खरर रामायण भन्न सक्नुहुन्थ्यो । नेपाली बरु राम्रोसँग बोल्न नसक्ने, तर रामायणको श्लोक मुखाग्र हुने । धार्मिकभन्दा पनि आत्मसन्तुष्टि र सुस्ताउने मेलोको रुपमा आ-आफ्नो लयमा रामायण पढेर मान्छेहरु सुत्थे । यसको अर्थ नेपाली समाजमा निकै भित्रसम्म गएर रामायणले छाप छोड्यो, राज्यले लादेकै सही ।
भानुभक्तले एक भाषा, एक जाति भनेर राजनीति गरेका थिएनन् । अरुहरुले भाषाको राजनीति गरे होलान् । तर, हामी यस्तो अवस्थामा आइसकेका छौं, अब हामीसँग नेपाली भाषाको विकल्प छैन । नेपालीहरुलाई एकसूत्रमा बाँध्ने भाषा नै यही हो । होला, भोलि हाम्रा नाति-पनाति पुस्तादेखि अंग्रेजी मात्र बोल्लान्, त्यो अलग कुरा हो । तर, कुनै पनि देशको सम्पर्कको साझा माध्यमका रुपमा आफ्नो भाषा हुन्छ, हुन्छ ।
भानुभक्तलाई सम्झिनु भनेको नेपाली भाषालाई मात्र सम्भिmनु हो भन्ने पनि होइन । उनी एउटा राष्ट्रिय चेतना हुन् ।
अहिले राष्ट्र पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा छ । भत्किएका कुरा बन्ने क्रममा छन् । यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।
यस क्रममा अहिले हामी इतिहासका घटना, पात्रहरुको संश्लेषण गर्ने प्रक्रियामा छौं । हाम्रो हिजोका कुरामध्ये कुन ठीक हुन्, कुन हैनन्, कुन-कुन कुरा आज र भोलिका लागि राख्नुपर्छ भनेर पर्गेल्ने समयमा छौं । तर, यो विषयमा दुईथरी अतिवादी विचार छन् । एकथरी जम्मै जोगाउनुपर्छ भन्नेहरु छन्, अर्काथरी केही पनि राख्नुहुन्न, नष्ट गर्नुपर्छ भन्दै छन् । दुईथरी अतिवादहरुको बीचबाट एउटा संश्लेषण पक्कै आउँछ ।
चीनमा माओले सांस्कृतिक क्रान्ति गरेपछि कति कुरा तहसनहस भए । तर, कम्युनिष्टहरुले पछि ऐतिहासिक सम्पदा र संस्कृतिको मूल्य बोध गरे । पुराना शासक र वंशका कुरालाई उनीहरुले संरक्षण गरेर राखेका छन् । ती कुरा हेर्न अहिले टिकट काटेर पस्नुपर्छ ।
हामी पनि असल र मूल्यवान् चिजहरु जोगाउने र खराब कुरा फाल्ने चरणमा छौं । यो प्रक्रियामा भानुभक्त चाहिँ हामीले जोगाउनुपर्ने ठूलो सम्पदा हुन् । मैले यो भनिरहँदा कतिपय मित्रहरुले मन नपराउन पनि सक्छन्, तर भानुभक्त नेपालीहरुको ठूलो सम्पदा हुन् । यो कुरा सरकारले कहिले बुझ्ला कुन्नि !
भोलि देश पुँजीवादमा गयो भने हाम्रो सम्पदा अनि हाम्रो भाषाको प्रारम्भिक सेवक भनेर पर्यटकमाझ बिक्री गर्न पनि सक्छौं । कसैले भानुभक्त ठीक छैनन्, नसम्झिँदा पनि हुन्छ भन्लान् । त्यो बेग्लै कुरा हो । तर, मेरो हेराइमा त भानुभक्त पृथ्वीनारायणभन्दा धेरै माथि छन् । पृथ्वीनारायणले त राज्य-राज्य गरेर भूगोल मात्र जोडेका हुन् । तर, आत्मिक र चेतनाको तहबाट नेपाललाई जोडेको हुनाले भानुको योगदान उपल्लो स्थानमा छ । हामीलाई उनले दैनिक कार्यव्यापार गर्ने भाषा दिए । हामीलाई नुन र तेल पैंचो माग्न, मेला र पर्ममा बोलाउन सिकाउने भाषा हो यो । उनको त्यो संवेदना जोडिन्छ ।
मैले यो चर्चा गर्दा एउटा कविले कविको गुणगान गायो भनेर मेरो यो भनाइलाई पनि कतिपयले अतिवादी भन्न सक्लान् । पृथ्वीनारायण जत्तिको भानु कहाँ हुन् र भन्न सक्छन् । तर, कुरा के हो भने, पृथ्वीनारायण यदि थिएनन् भने अर्को कुनै न कुनै राजा वा शासकले नेपाल एकीकरण गरेको हुन सक्थ्यो । उनको विकल्प हुन्थ्यो । जसले राजय जोडे पनि हामीसँग देश हुन्थ्यो ।
तर, कवि र प्रतिभाहरुको विकल्प खोज्न समय कुर्नुपर्छ । ठूला कवि, कलाकार, महान् दार्शनिक, वैज्ञानिकहरु पाउनको लागि एउटा देशले युग नै कुर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि एउटा कवि पाउनु भनेको प्रधानमन्त्री पाउनु जस्तो सजिलो कुरा होइन । हामीले त्यसरी महत्व बुझ्नुपर्छ ।
भानुभक्त सम्बन्धी मेरो कविता
मैले ०६५ सालतिर ‘भानुभक्त’ भन्ने कविता नै लेखेँ । मैले खासगरी पछिल्लो समय युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रमलाई कवितामा ल्याएको हो । मैले कवितामा एक किसिमले विनिर्माण र स्वैरकल्पना गरेर आजको भानुभक्त बनाएको हुँ ।
कवितामा अन्य अग्रज कविलाई नल्याई भानुभक्तको चरित्र ल्याउनुको कारण पनि राष्ट्रिय मुद्दासँग जोडेको हो कवितालाई । निश्चित सीमा कोरेर यो भानुभक्त व्यक्तिविशेषमाथि लेखिएको कविता होइन । राष्ट्रिय एकताको चेतनाको प्रतीकको रुपमा उनलाई ल्याएको हो ।
यति लामो समयसम्म भानुभक्तलाई हेर्दा एकताको प्रतीकका रुपमा ल्याउँदा सार्थक हुन्छ होला भन्ने मेरो ठम्याइ अनुसार त्यो कविता लेखेको हुँ । मैले लेखेको छु, कतै चिम्सा आँखा, कतै लामो नाक । त्यो संरचना प्रयोग गरेर मैले भानुभक्त हरेक कालखण्डमा जन्मिँदै छ र जन्मिन्छ भनेर नेपालीहरुको साझा प्रतीकको रुपमा ल्याएको छु ।
भानुभक्तलाई हामीले बिर्सिनका लागि कि त हामीले नेपाली भाषा नै बिर्सिनुपर्‍यो । त्यो कविता लेख्नुको उद्देश्य पनि नेपाली साहित्य र नेपाली भाषा सम्झन्छौं भने त भानुभक्तलाई बिर्सन मिलेन भन्ने कुरालाई पनि बल पुर्‍यायोस् भन्ने थियो । त्यसो त एउटा कविताको हजार वटा अर्थ हुन सक्छ ।
अर्को कुरा, अहिले नेपाली कवि-लेखकहरु थुप्रै छन् । प्रवासमा पनि जहाँ-जहाँ नेपालीहरु गएका छन्, त्यहाँ लेखकहरु पनि छन् । त्यो कुरालाई पनि ‘भानुभक्त’ कविताले इंगित गरेको छ । त्यहाँ नेपाली लेखकहरुको अवस्थालाई पनि देखाएको छ । नेपालमा एउटा लेखक लेखक भएर बाँच्नका लागि अझै पनि अनुकूल अवस्था छैन, यो पेशा बन्न सकेको छैन । लेखक भएर बाँच्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ जीवनभर ।
आज भानुभक्त भए…
आजको समयमा भानुभक्त आचार्य भएका भए उनको सोच, लेखनका मुद्दा र जीवनशैली कस्तो हुन्थ्यो होला त ?
चुँदी रम्घाका भानुभक्तलाई हेर्दा अहिले त्यो ठाउँ वरिपरि रहेका मानिसहरुको जीवनलाई पनि हेर्नुपर्छ, अनि मात्र अड्कल काट्न सकिन्छ । म चुँदी रम्घा पुगेको छु । त्यहाँ यथास्थितिवादी र प्रगतिशील दृष्टिकोण बोक्ने मानिसहरु अहिले पनि छन् । त्यही आचार्य खलकमा पनि होलान् । गणतन्त्र र विविधताको वकालत गर्ने पनि त्यहीँभित्र होलान् अनि संघीयता मन नपराउने यथास्थितिवादीहरु पनि त्यहीँ होलान् ।
भानुभक्त चाहिँ के हुन्थे होला भन्ने प्रश्न आउँदा उनलाई पनि दुवै तरिकाले हेर्न सकिन्छ । एउटा चाहिँ ‘बधूशिक्षा’ लेख्ने भानुभक्त छन् । जहाँ उनले हाँस्ने नारी ठीक हैन भनेर लेखे । ‘हाँस्नु छैन कदापि नारीहरुले वेश्या हुना हास्तछन्’ भनेर लेख्ने उनी नारीवादका दृष्टिले आलोचित पनि छन् । महिलाको स्वतन्त्रताको विपरीत छ त्यो कृति ।
अर्कातिर, कवितामा नै चाकडी, भ्रष्टाचार र प्रशासनिक ढिलासुस्तीको विरोध गर्ने भानुभक्त पनि हामी देख्न सक्छौं । यसरी चेतनाको दृष्टिकोणले दुई वटा भानुभक्त प्रष्टै देखिन्छ ।
आज भानुभक्त हुन्थे भने कुन कोटिमा हुन्थे भने एउटा कविले समयको प्रवाहलाई त पक्रिँदै अगाडि बढ्छ । त्यस हिसाबले हेर्दा अहिले भानुभक्त गणतन्त्रको वकालत गरिरहेको एउटा योद्धा कविको रुपमा हुन्थे होला भन्ने लाग्छ । उनको रचनाधर्मिताले त्यो सम्भावनाको पल्ला भारी देखाउँछ ।
उनी नेपाली साहित्यको प्राथमिक काल अन्तर्गत भक्तिधाराका कवि हुन् । तर, समयको वहाबको कुरा आउँछ । उनको समय र आजको समय फरक छ र उतिबेला र अहिलेको साहित्यको टे्रण्ड पनि फरक छ । उनले उतिबेला पो रामायणको अनुवाद गरे, आज थिए भने समकालीन लेखनमा सक्रिय रहेको कुनै विदेशी कविको अनुवाद गर्ने थिए होलान् ।
जीवनशैलीको कुरा गर्दा आजको सूचना-प्रविधिसँग गाँसिएको दिनचर्याको पनि कुरा छुटाउन मिल्दैन । भानुभक्त आज भएका भए उनको जीवनशैली र चालढाल कस्तो हुन्थ्यो त ? त्यसको लख काट्न उनी अहिले कुन उमेरमा बाँचिरहेको मान्ने भन्ने पनि कुरा आउँछ । कम्तीमा मेरो उमेरको (५०) हो भने आधुनिक प्रविधिमा त्यति साह्रो भिजिनसकेको, हातैले कविता लेख्नुपर्ने, कम्प्युटरमा कविता लेखे पनि कृत्रिम जस्तो महसुस गर्ने अनुभूति गर्थे होलान् ।
तर, आजको दिन प्रविधिमा राम्रो दखल नभएका मान्छेले पनि यो नसिकी भएको छैन । त्यस हिसाबले हेर्दा उनी फेसबुक चलाउन सिक्दै गरेको र चार लाइन स्टाटस लेख्न पनि १० मिनेट लगाउने टाइपको कवि हुने थिए होलान् । हाम्रो पुस्ता भनेको यो हो, परम्परालाई समात्दै आधुनिकतातिर हात बढाइरहेकाले एक किसिमले संक्रमणमा छौं । प्रविधि एक्कासि झ्याप्पै आयो । भर्खरका मान्छेहरुले त चाँडै सिकिहाल्छन्, हामीले चाहिँ तुरुन्तै समात्न सक्दैनौं ।
भानु आजका दिनमा भए पोजिसन पनि खतरै हुन्थ्यो होला । उनले लेख्ने फेसबुक स्टाटस पनि गजबकै हुनेथ्यो । उनी त काठमाडौं आएर यहाँका नेवार्नीहरु देखेर भुतुक्कै भएका मान्छे हुन्, शृंगारिक टाइपका कवि । उनका सिर्जना पढ्दा अलि डुलडाल गर्ने मान्छे पनि लाग्छ । यायावर नै भएर संसार घुमिरहेका पनि हुन सक्थे । नेपालमै रहेको स्थितिमा देशको राजनीति, समाज र समकालीन घटनाक्रममाथि स्टाटस पनि बेलाबेलामा आइरहन्थ्यो । चुनावका बारेमा लेख्थे होलान् । उनी पनि कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध हुन्थे होलान् ।
भानुभक्तले त्यो जमानामा ‘रामायण’ लेखे । उनी आजको समयमा भए अहिले संसारभरिकै लेखनमा चलिरहेको कुरा नै लेख्ने थिए । अहिले विश्वमै सीमान्तकृतहरुको आवाज, महिला मुक्तिको आवाज, दलित, जनजाति आदि किनारमा पारिएका र उपेक्षितहरुलाई कसरी अगाडि ल्याउने, बोल्न नसक्नेहरुको कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय लेखनमा आइरहेको छ । मेरो विचारमा भानुभक्तले पनि सायद तिनै कुरा लेख्थे । कुनै त्यस्तै आवाजलाई पक्रेर कृतिको अनुवाद गर्थे होला वा आफैं लेख्थे होलान् ।
उनले समग्रमा जनताको साहित्य लेख्थे । किनकि रामायण पनि जनताले लिएपछि जनताकै साहित्यका रुपमा दर्ज भएको छ ।
२०७४ असार ३० गते ५:०९ मा प्रकाशित (२०७४ असार ३१ गते ११:०५मा अद्यावधिक गरिएको)
#आदिकवि भानुभक्त आचार्य#नेपाली भाषा#श्रवण मुकारुङ#साहित्य
संविधानका १० खेलाडीः कसको भूमिका कस्तो ?
असोज ३ को दुःख- जनताको आवाज सुन्ने कि अभियन्ताको कुण्ठा ?
संविधान दिवसः तपाईंको घरमा पन्चेबाजा, हाम्रो घरमा सोह्रश्राद्ध ?
६ प्रतिकृयाहरू प्राप्त
चेम्जोंग लेख्नुहुन्छ | २०७४ असार २९ गते १३:२८
तर मेरो नजरमा चाहि श्रवण मुकारुङ, बैरागी काइला र उपेन्द्र सुब्बा जति पनि हैन ! हुन त सबै खगेन्द्र संग्रौला हुन सक्दैनन् ; तै पनि धर्मराजहरु, हरिभक्तहरु देबकोटाहरु धेरै माथिका हुन् !
Niyanta Updhyaya लेख्नुहुन्छ | २०७४ असार २९ गते १३:३०
जन्मदिनको शुभकामना ।।
पृथ्वीनारायणले राज्यको एकीकरण गरें भने भानुभक्तले भाषाको दुवै आ आफ्ना स्थानमा सम्माननीय र आदरणीय छन् ।
भानुभक्त भाषा साहित्यका धरोहर हुन । उनको योग्दानको आफ्नै विशिष्ट महत्व रहेको छ ।
कसैको पनि योग्दानलाई सामानको नापतौल गरे जस्तो जोख्न सकिदैन र मिल्दैन पनि ।
पृथ्वीनारायण शाह राजनीतिज्ञ हुन् उनको योग्दान इतिहासमा त्यही भुमिकामा अब्बल रहेको छ ।
शिक्षक र विद्यार्थीको तुलना हुन नसके जस्तै विशुद्ध राजनीति गर्ने र साहित्यकारको तुलना हुन सक्दैन ।
जन्म दिन त जसको पनि जस्ले पनि हर्षोल्लासका साथ मनाउछन् । आदिकविलाई जन्मदिनमा मात्रै
सम्झने प्रवृति कहिले घटला र साहित्यकार माथि वास्तविक न्याय होला सुरूवात आजका दिन देखि गरे
भानुको आत्माले वास्तविक न्यायको महसुस गर्ने थियो । भानु तिमी युगौं युगौ अमर रहने छौं, अमर भएर
गयौं । तिमीलाई जन्मदिनको अनन्य शुभकामना ।। शुभकामना ।। शुभकामना ।।
Ramkrishna sharma लेख्नुहुन्छ | २०७४ असार २९ गते १४:४६
प्यारा भानु कवि थियौ जगतमा, साहित्यका सारथी
भाषालाई वचाउने प्रण गर्यौ, मिठा रची काव्य ती ।
मात्रै क्षण भरमा रचेर कविता नौलो वनायौ सव
मोहितै सव पर्दछन ती कविता पढ्छन कसैले जब ।।
upadhyaya, Prashanta लेख्नुहुन्छ | २०७४ असार २९ गते २२:३७
Mukarungji,Prithvinarayan shah ra Bhanubhaktalai tulana garna mildaina.Duiwatai byaktitwaharu euta aadhunik Nepali sabhyata nirman garne mahan silpiharu hun.Tara pharak pharak bidhabata.yedi hamile ti bibhutiharulai uchit samman dina sakdainau bhane hamro chet unnat nabhayekai abashtama rahechha ajhai bhanne hoinara?
रमण पनेरू लेख्नुहुन्छ | २०७४ असार ३१ गते १८:२०
राजालार्इ गाली गर्नु गणतान्त्रिक हुनु हाे भन्ने मान्यताका कारण मुकारूङले पृथ्वीनारायण भन्दा माथि भानुभक्तलार्इ राखेकाे जस्ताे लाग्याे । खासमा पृथ्वीनारायणले नगरे अर्काेले गर्थ्याे भन्नु उनकाे याेगदानकाे अवमुल्यन गर्नु हाे । त्यसाे त भानुले नलेखे अर्काले लेख्थे । अझै पनि किवता लेखि रहेकै छन् । कविता लेख्नु र ज्यान हत्केलामा राखेर देश एकिकरण गर्नुकाे तुलना हुन सक्दैन । पुरै व्यक्तिलार्इ द्याैता वा दानव बनाउने भन्दा पनि व्यक्तिका कामहरूलार्इ असल र खराब भनि छुट्याउनु ठीक हाेला ।
पृथ्वीनारायण शाहबाट एकिकरण ताका किरातीहरूमाथि भएकाे भनिएकाे अत्याचार गलत थियाे भने देश एक ढिक्का हुनु सहि थियाे । पृथ्वीनारायण शाहका सन्ततीकाे भूलकाे जिम्मेवार पनि उनी हाेइनन् । किरातीहरूबाट पनि भुल भएकाे छ । बुद्धिकर्ण रार्इ ब्रिटिस सरकार समक्ष देश बुझाउन गएकाे इमानसिंह चेमजाङले किराती संस्कृति तथा इतिहाँसमा लेखेका छन् । सेन राजालार्इ मारेर बुद्धिकर्ण रार्इले सासन सत्ता हातमा लिएकाे कुरा पनि त्यसैमा उल्लेख छ । सिक्किमेसँग मिलेर सिक्किम नेपाल युद्धमा पनि किरातीहरू सहभागी थिए । इतिहास काेट्यायाे भने धेरै कुरा निस्किन्छन् ।
Arjun Khatiwada लेख्नुहुन्छ | २०७४ साउन ४ गते १६:०३
100% sahi, great evaluation……
सामसुङका कारण आइफोन महंगो !
दशैंमा कुन बाइक किन्दा कति छुट ?
सलमानलाइ हेर्न यूवतीको फ्यान
पर्साका ४ स्थानीय तहमा एमालेको अग्रता, कांग्रेस र माओवादी १/१ ठाउँमा अगाडि
टाटा मोबाइलको ठक्करबाट बानेश्वरमा युवकको मृत्यु